Sidee musharraxa laga adkaado uu u qiranayaa guul-darrada? | XORRIYA NEWS
Home Caalamka Sidee musharraxa laga adkaado uu u qiranayaa guul-darrada?
Sidee musharraxa laga adkaado uu u qiranayaa guul-darrada?
Tani waa khudbaddii John McCain uu ku qirtay in Barack Obama uu kaga guukeystay doorashada sanadkii 2008, haddaba sidee Trump & Biden musharraxii laga adkaado uu u qiranayaa guul-darrada?
“Sanatar Jones ayaa hadda igu wargeliyay in natiijada ay muujineyso in adiga lagu doortay, waxaana si degdeg ah kuugu soo gudbinayaa hambalyo. Waxaan arrinta ku wareejinnay dadka Mareykanka hankooduna waa sharciga.”